နေဆဲဆေးလိပ်သောက်၏ 30 ရာခိုင်နှုန်းကိုလှည့်ပတ်စာရင်းများအရအဆိုပါစီးကရက်မှကိုယ်ဝန်၏အစကိုတက်ယူပါ။ ဒါကြောင့်အလှည့်အတွက်Glimmstängelnကနေဝေးနေကိုယ်ဝန်အစောပိုင်းလအတွင်းတစ်ဝက်ဖန်တီးသော။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ဆေးလိပ်သောက်ကြီးမားတဲ့အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ဆေးလိပ်သောက် - ကသိသိသာသာအကျိုးဆက်တွေကိုခြိမ်းခြောက်နေ
ကြွင်းသောအရာများအတွက်, ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 15 ရာခိုင်နှုန်း, နီကိုတင်းစွဲလမ်းပေမယ့်ဒါခိုင်မာတဲ့နေ့စဉ်ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူဤသင့်ကလေးကိုအန္တရာယ်ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဦးဆုံးအနှီး contents တွေကိုကိုယ်ဝန်စဉ်အတွင်းမိခင်၏အခိုးအငွေ့ထိတွေ့ခြင်းမှထုတ်ဖော်ပြသ
meconium အဖြစ် - သို့မဟုတ်အသိအမှတ်ပြုထားသည့် meconium ဟုခေါ်တွင် - ပထမကုလားထိုင်ကလေးထဲကနေပြန်ထွက်သွားသည်သောကလေးမွေးဖွားပြီးနောက် scolds ။ ဤသည်ပြီးသားကိုယ်ဝန်စတုတ္ထလကနေဖွဲ့စည်းသည်။ ဒါဟာ Schleimhut နှင့်အရေပြားဆဲလ်များနှင့်ဆံပင်၏သဲလွန်စတွေကိုရှင်းလင်းဆံ့ရသောမျို amniotic အရည်ကနေ thickened သည်းခြေဆဲလ်ပါရှိသည်။
စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုလည်းအစီရင်ခံစာကိုယ်ဝန်၏နောက်ဆုံး6လအတွင်းစားသုံးခဲ့ကြရာညစ်ညမ်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးပျက်စီးခြင်းထုတ်ကုန်တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်ပါဝင်သောဖော်ပြခဲ့တယ်။ သို့သော်မိခင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ထိတွေ့ခဲ့သည့်မီးခိုးပမာဏ၏အသေးစိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမဖြစ်နိုင်ပါ။
သငျသညျဘာမှဆရာဝန်များနှင့်ကျွမ်းကျင်သူများကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ဆေးလိပ်သောက်တားအကြံပေးမျှော်လင့်ထားလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်, သန္ဓေသား၏တိုးတက်မှုဆိုးရွားစွာထိခိုက်စေခြင်းငှါနှင့်အစောပိုင်းသို့မဟုတ်အဆိုးဆုံးကိုယ်ဝန်ပျက်ကျမှာ၏အန္တရာယ်ရေရှည်တည်တံ့တိုးပွါး။ ထို့အပြင်ထိုကဲ့သို့သောလှီကိုယ်လက်အင်္ဂါသို့မဟုတ်ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကို သိ. အဖြစ် Malformed များ၏အန္တရာယ်တိုးလာနေပါတယ်။
ထို့အပွငျကကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများဆေးလိပ်သောက်ခြင်း, မွေးဖွားကလေးပုံမှန်ကိုယ်ဝန်အတွက်ထက်ပျမ်းမျှအားဖြင့် 200 ဂရမ်ပေါ့ပါးဖြစ်ကြောင်း။ ပြသ ကြောင်းဆေးလိပ်သောက်၏ရလဒ်အဖြစ်အမိ၏သွေးကြောကျပ်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။
အရှင်ထောက်ပံ့ရေးရရှိနိုင် verschlechter လုပ်. ကလေးက၎င်း၏တိုးတက်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်တစ်ဦးတည်တံ့အနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုရှိသည့်ကျြကွိုးမှတဆင့်ဒီထက်အာဟာရနှင့်အောက်စီဂျင်, ရရှိသွားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, နောက်ဆက်တွဲ type ကိုရောဂါကူးစက်သို့မဟုတ်မွေးကင်းစကလေးအသေခံ syndrome ရောဂါ၏အန္တရာယ်ကိုအကြောင်းကိုနှစ်ကြိမ်အဖြစ်မြင့်မားသည်။
လေ့လာရေးဆေးလိပ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်တစ်ဦး fag များအတွက် Cross-အပိုင်း 13 ကြိမ်နေ့ရက်ကာလ၌ထိတွေ့ဆက်ဆံကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။ 3600 စီးကရက်အကြောင်းကိုပေါ်ထွန်းကိုးလ, အရှင်, ပုံမှန်ကိုယ်ဝန်ကြာချိန်မှ Extrapolated ။ နေဆဲကင်ဆာနှင့်မြင့်မားသောအဆိပ်အတောက်တွေဟာအချို့သောအရာ၏စီးကရက်မီးခိုးထဲမှာပါရှိသောအချို့သော 4000 ဓာတုပစ္စည်းကိုရှာဖွေပါလျှင်, စဉ်းစားနေကြသည်, တကမကောင်းတဲ့နိုင်ပါတယ်။
ဆေးလိပ်သောက်ဝယ်ထဲမှာကင်ဆာတွေအများကြီးများအတွက်သိသိသာသာတိုးမြှင့်အန္တရာယ်ယူကြောင်းရှည်လျားလူသိများသည်။ ဒါပေမယ့်ကလေးကိုယ်ဝန်စဉ်အတွင်းဆေးလိပ်သောက်ထဲမှာကင်ဆာ၏နောက်ပိုင်းတွင်ရောဂါများအတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်သောကျောက်ထားရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ဂျာမန်ကင်ဆာသုတေသနစင်တာမှတစ်ဦးလေ့လာမှုပတ်သတ်ပြီးအတွက်ဆီးအိမ်နှင့်အထက်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကင်ဆာများအတွက်ကိုယ်ဝန်စဉ်အတွင်းစီးကရက်သောက်သည်တဲ့သူမိခင်များ၏သားသမီးများ, ဒါမှမဟုတ်အကြောင်းကိုတဦးတည်း 1,5 ဆပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်သော။ အဆုတ်ကင်ဆာမှာ, 1,7-ခြံအကြောင်းနှင့်ပင်နှာခေါင်းကင်ဆာအတွက်သုံးဆ။
နိဂုံးထို့ကြောင့်သာကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများဆေးလိပ်သောက်ခြင်းမှရှောင်ကြဉ်သင့်ကြောင်းနိုင်ပါတယ်ရန်ရှိသည်။ ဒါဟာမွေးသေးသောကလေးအဘို့မသာကျိုးနပ်သည်။ မိခင်ပြီးသားနာရီအနည်းငယ်အကြာတွင်ဆေးလိပ်သောက်စွန့်လွှတ်၏အပြုသဘောသက်ရောက်မှုတွေ့နိုင်ပါသည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးပြုတ်ကျသွေးပေါင်ချိန်နှင့်နှလုံးခုန်နှုန်းခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 20 မိနစ်အကြာတွင်လေ့လာတွေ့ရှိရသည်။ Kohlenmonooxidgehalt ရှစ်နာရီအတွင်းသွေးထဲတွင်ပြီးသားသိသိသာသာလျော့နည်းစေပါသည်။ ယခုအောက်စီဂျင်နှင့်အာဟာရလုံလောက်သောငွေပမာဏကိုရရှိသွားတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကလည်းအလျင်အမြန်ကလေးကိုသတိရလိမ့်မယ်။
ပိတ်ပင်ထားမှုပေမယ့်အခန်းဖော်သို့မဟုတ်သိသာထင်ရှားသောသည်အခြားဆေးလိပ်များနှင့်အခါကိုယ်ဝန်ဆောင်သောမိန်းမ၏ယောက်ျားမဖြေရှင်းနိုင်သေးလုံးဝမခံစားရသင့်တယ်။ တောင်မှ passive ဆေးလိပ်သောက်မိခင်ထားပြီးမွေးသေးသောကလေးကအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်သောမိန်းမမူအရတည်းခိုနေသည်သင့်သည့်အတွက်ဘတ်ဂျက် Non-ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းရှိကြလော့။ ဟုတ်ပါတယ်, ဆေးလိပ်သောက်ဖို့လုံးဝကိုယ်ဝန်ပြီးနောက်မသုံးသင့်ပါတယ်။
ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ | ကျန်းမာခြင်း
ဆေးလိပ်သောက်တက်ပေးခြင်း - က Non ဆေးလိပ်သောက်နေပါ